Gudiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka oo Tababar Howleed ugu Soo Gabagaboobay Nairobi”Sawiiro” |
Gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxaa maanta magaalada Nairobi ugu soo gabagaboobay tababar howleed u socday mudo afar maalmood ah oo ay uga doodayeen qorshayaasha hor yaala gudiga.
Tababarkan loo qabtay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxaa fududeeyay hay’adda qaramada u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee UNSOM.
Xiritaankii tababarkan u socday gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka qeyb galay safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan,xubno matalayay wadamada deeq bixiyaasha iyo qaar ka mid ah diplomaasiyiinta reer galbeedka ee fadhigoodu yahay Nairobi.
Gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo (Yareey) ayaa sheegtay labadii maalin ee ugu horeysay tababarka lagu barayay gudiga sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen iyo sidii ay uga xalin lahaayeen caqabadaha soo wajaho.
Xaliimo Yareey ayaa sidoo kale sheegtay in labadii maalin ee kale gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ay isla meel dhigayeen qorshaha gudiga oo ah sidii dalka Soomaaliya ay mustaqbalka u gaarsin lahaayeen doorashooyin xur ah.
Gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa sidoo kale ka dooday qorshaha hor yaalo sedaxda bilood ee ka harsan sanadkan iyo qorshaha sanadka soo socda ee 2016.
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka u soo xiray tababarkan ayaa kula dar daarmay in ay si taxadir leh u wajahaan shaqada adag ee hor taala,isagoo wadamada deeq bixiyaasha ugu baaqay in ay taageero dhinac kasta leh siiyaan gudigan.